मधेसमा जन्मेको मान्छे हुँ, बन्द हडताललाई कहिल्यै समर्थन गर्दिँन 'माग पूरा नगर्ने भए सरकारले बल प्रयोग गरोस्'-पशुपति मुरारका गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तामधेसमा जन्मेको मान्छे हुँ, बन्द हडताललाई कहिल्यै समर्थन गर्दिँन 'माग पूरा नगर्ने भए सरकारले बल प्रयोग गरोस्'-पशुपति मुरारका मधेसमा जन्मेको मान्छे हुँ, बन्द हडताललाई कहिल्यै समर्थन गर्दिँन 'माग पूरा नगर्ने भए सरकारले बल प्रयोग गरोस्'-पशुपति मुरारका Written by Yatra Daily
Monday, 30 November 2015 13:43	Rate this item
देशका सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायी संघीयता स्थगित हुनुपर्ने कुरामा एकमत रहेको मुरारकाको दाबी छ । संघीयताप्रति असन्तोषका आधार तथा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा खुलस्तरुपमा प्रस्तुत भए ।
प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त पार्छु भन्नुभएको छ । यो आफैंमा राम्रो हो । तर, यसका लागि योजना खोइ त ? यदि राज्यले सारा जोड लगाएर काम गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र २० हजार मेगावाट उत्पादन गरेर बेच्न सक्छौं । छिमेकी देशको ठूलो बजारलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौं ।
हामीले भारतीय उत्पादनलाई आफ्नो बजार सुम्पियौं । तर, भारतको त्यति ठूलो बजारलाई उपयोग गर्न सकेनौं । निकासीजन्य वस्तुहरु बढाउन सकेनौं बरु खुम्च्याउँदै लग्यौं । त्यसैले भारतसितको हाम्रो व्यापार असन्तुलन निरन्तर बढिरह्यो ।pasupati Murarka (1)
प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी पौडेल, नविन अर्याल
Read 548 times	Tweet
« छोड्नुस् अब मधेसीलाई गाली गर्न ! - विशाल शाह	कतिको उद्योग लिलाम होला, कतिले आत्महत्या गर्न सक्लान् : अशोक कुमार वैद्य »